राष्ट्र बचाउन राष्ट्रवादी शक्ति एक हुनुपर्छः पशुतिशमशेर राणा
रिपोर्ट नेपाल | 2019 Mar 09 | 08:44 am	47
पशुपति शमशेर राणा नेपाली राजनीतिका चतुर खेलाडीका रुपमा परिचित छन् । धेरै नबोल्ने तर हरेक कार्य कुटनितिक तरिकाबाट फत्ते गर्ने राणा पंचायतदेखि सकृय राजनीतिमा लागेका व्यक्ति हुन् । २०६३/६३ को आन्दोलनमा सकृय रुपमा राजतन्त्रको विरोधमा लागेका उनी यतिखेर आएर संवैधानीक राजा र हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा आवाज उठाउन थालेका छन् । हालै डा प्रकाशचन्द्र लोहनीसँग पार्टी एकता गरी राप्रपा संयुक्तको अध्यक्ष बनेका राणासँग वर्तमान सरकारको कार्यशैली दुई राप्रपाको एकता र कमल थापा नेतृत्व राप्रपासँगको दूरीका विषयमा रिपोर्ट नेपालले गरेको कुराकानी प्रस्तुत गरेका छौं ।
वर्तमान सरकारको मूल्याङ्कन गर्नु पर्दा तपाई कसरी गर्नुहुन्छ ?
म पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र वर्तमान प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको दुई कार्यकाल बारे पहिला विश्लेषण गर्न चाहान्छु । अहिले पूर्व भएका त्यस बेलाका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको क्षमता भारतीय नाकाबन्दीसँग जुध्दै जनतालाई आफ्नो पक्षमा गोलबन्द गराउँने थियो । त्यसबेला उनी दाँयाबाँया नहेरी अघि मात्रै हेर्थे । त्यसैको परिणाम स्वरुप माओवादीलाई मिलाएर निर्वाचनमा गई प्रर्याप्त सिट प्राप्त गरी पार्टी एकता गरेको सफल केपी थिए । अहिलेको सरकार हाँकेको केपी घरी अघि हेर्छन कतिखेर ह्वात्तै पछि फर्कनछन्, डर त्रास सहित अघि बढेका असफल प्रधानमन्त्रीका रुपमा देखिन्छन् । उनको यस पटकको एक वर्षे कार्यकाल केवल भाषण, गाली र उपचारमा खर्च भयो कुनै ठोस उपलब्धी हुन सकेन ।
प्रधानमन्त्री ओली त सरकारले ऐतिहासिक र गर्व गर्ने काम गरेको देख्न नसकेर विपक्षी मुर्छा परेको भन्दैहुनुहुन्छ त ?
प्रधानमन्त्री निर्मला हत्याकाण्ड पत्ता लगाउन नसकेको, बुढीगण्डकी बिना टेण्डर ठेक्का दिएर भ्रष्ट्राचार भएको, भ्रष्ट्राचारको विकेन्द्रीकरणलाई उच्च महत्व दिएको कुरालाई गर्व भनेको भए मलाई थाहा भएन । अरु कुनै पनि उल्लेख गर्ने र जनतालाई राहत पुग्ने काम भएको छैन । सरकरमा बसेर आसन, शासन र रासन खाएकोले कहाँ नराम्रो गरे भन्छ र !
तपाई विपक्षी भएका नाताले धर्म निर्वाह गर्नु भएको हो कि सरकार साच्चीकै असफल र भ्रष्ट्राचारमा डुबेको छ ?
तपाईले यस विषयमा टाढा जानै पर्दैन डा गोविन्द केसी जस्तो व्यक्तिले गरिब जनताको लागि उठाएको कुरालाई पूरा वेवास्ता गर्दै मेडिकल माफियासँग मिलेको प्रष्ट देखिन्छ ।
प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसको भूमिका कस्तो देख्नुहुन्छ ?
प्रतिपक्ष काँग्रेसले जुन इश्युलाई समातेर सरकारको शेखी झार्नुपर्ने थियो त्यो नगरेर सरकारकै मादलको तालमा उ नृत्य गर्दैछ ।
प्रसंग बदलौं तपाई र लोहनीले नेतृत्व गरेको पार्टीको एकतापछि तपाइका निकै नजिकका भनिने दिपक बोहराले पार्टी छाडेर कमल थापा प्रति गए नि के हो ?
बोहरा जी अहिले त्यता जादैमा जहाज नै डुब्ने होइन भोली उहाँ पनि हामीसँगै हुनुहुनेछ । देश अप्ठ्यारेमा परेको बेला, राष्ट्रितामाथि चौतर्फी आक्रमण भई रहेको समयमा सबै राष्ट्रवादी शक्तिको एकता आवश्यकता छ । त्यहीं कुरालाई बुझेर हामीले पद र प्रतिष्ठा भन्दा देश ठूलो सम्झेर लोहनी जी र हामी एक भएका हौं ।
तपाईहरुको टुट्ने फुट्ने र मिल्नेको कुनै विश्वास हुँदैन यो एकता पनि कायम रहन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?
डा लोहनी जी र हाम्रोबीचको एकतालाई भाँजो हाल्ने काम नभएको होइन तर हामी के कुरामा सचेत थियौं भने राष्ट्रियताको संरक्षणका लागि टुट नभएर जुट नै प्रमुख हो भन्ने कुरामा एकताको प्रकृया शुरु भएको छ अव तपाईहरु र आम कार्यकर्ताले प्रश्न गर्न नपाउने गरी अन्य पार्टीसँग पनि एकता गर्नका लागि वार्ता गर्नेछौं ।
मलुक यतिखेर आर्थिक, राजनीतिक रुपमा मात्र कमजोर नभएर राष्ट्रियता नै शंकटमा परेको छ । यस्तो बेला पार्टी एकता नगरे पनि कार्यगत एकता गरेर अघि बढ्न सबै राष्ट्रवादी शक्तिलाई आग्रह गर्दछु ।
किन गरियो धोवीखोला सफाई ?
ऐन महरको चयनपछि अखिलमा उत्साह
प्रहरीको गोलीबाट घाइते तामाङको वीरमा उपचार हुँदै
दुई पाङ्ग्रेको पछाडी बस्नेले पनि हेलमेट लगाउने कुराको सर्वत्र विरोध
१३ करोड लागतमा नयाँ भवन बनाउने साझा प्रकाशनको तयारी
बाल मन्दिरको भवनमा प्रहरी वृत्त सार्ने तयारी
एक वर्षकाे निर्णयमा दुई पार्टीबीच एकता कि गठबन्धन !
नागरिक समाजका अगुवाद्वारा सरकार अधिनायकवादतर्फ गएको आरोप
भारतमा फेरि मोदीले बाजी मार्दै
कारबाही हुन अगावै न्यायाधीश उपाध्यायले दिए राजीनामा
आजको राशिफलः जेठ ६ गते सोमबार